साउदीमा १४ सय कोरोना निको, बाँकी कहाँ-कहाँ उपचार हुँदै? -
साउदीमा १४ सय कोरोना निको, बाँकी कहाँ-कहाँ उपचार हुँदै?
कुल कोरोना निको हुनेको संख्या दुई लाख ५३ हजार नाघ्यो
२७ श्रावण २०७७, मंगलवार ०१:१३ । साउदी अरेबिया
साउदी अरेबियामा कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) संक्रमित कुल दुई लाख ८९ हजार ९४७ जना पुगेका छन् । उक्त संख्यामा हालसम्म कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा.मोहम्मद अल अब्दुलीले बताए । उनकाअनुसार सोमबार मात्र १ हजार २५७ जना नयाँ कोरोना संक्रमित थपिएका हुन् ।
प्रवक्ता डा.अब्दुलीले सोमबारसम्म उक्त संख्यामा कोरोना संक्रमित पुष्टि भएको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको हो । कुल संक्रमितमध्ये यहाँको विभिन्न अस्पतालहरुमा अझै ३३ हजार २७० जना विशेष उपचार लिइरहेको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले बताए । प्रवक्ताका अनुसार १ हजार ८२४ जना भने गम्भीर अवस्थामा उपचाररत छन् ।
त्यसैगरी सोमबारसम्म कोरोना भाइरसका कारण ३ हजार १९९ जनाको मृत्यु भैसकेको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले बताए । तीमध्ये हालसम्म चार दर्जनभन्दा बढी नेपालीको कोरोनाबाट मृत्यु भएको विशेष स्रोतको दावी छ , भने प्रवक्ताकाअनुसार आजै मात्रै कोरोनाको उपचार गरिरहेका ३२ जनाको मृत्यु भएका छन् ।
यहाँ झन्डै दुई हप्तादेखि कोरोना उपचारपछि निको हुनेको संख्यामा निरन्तर वृद्धि भइरहेको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए ।
सोमबार यहाँ १ हजार ४३९ जना कोरोना भाइरसको उपचारपछि घर फर्किएको प्रवक्ता डा.अब्दुलीले बताए । उनकाअनुसार हालसम्म साउदीमा कोरोनाको उपचारपछि घर कुल दुई लाख ५३ हजार ४७८ जना पुगेका छन् ।
आजको अपडेट अनुसार नयाँ संक्रमितभन्दा कोरोना भाइरसको उपचारपछि घर फर्किने १८१ जना बढी छन् । यहाँ कोरोना गत मार्च २ तारीखबाट सुरु भएको थियो ।
यहाँ कोरोनाको संकेत देखिएमा स्वास्थ मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बर ९३७ मा फोन गर्नसक्ने प्रवक्ता डा. अब्दुलालीले बताए । ‘ We are all responsible ’ भन्ने नारालाई आत्मसात गरी कोभीड-१९ रोकथामका लागि सरकारले गरेका प्रयासलाई सबैले सहयोग गर्न प्रवक्ता डा.अब्दुलालीले आग्रह गर
हालसम्म साउदीको रियाद शहरमा सबैभन्दा धेरै ४ हजार ५५१ जना कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा.अब्दुलीले जानकारी दिए ।
उनकाअनुसार साउदीका जेद्दामा ३ हजार ६२०, स्टर्नमा २४३, हफुफ २ हजार ५७५, दमाम १ हजार ८०१, मदिना १ हजार ५६२, मक्का १ हजार ४९५, अल मुबाराज १ हजार २७०, नजरान ८७६,तैफ ७८७, अलबाहा ४२, ताबुक २७, नोर्ट्न बोर्डर १५ र अलजुफमा ७ जनामा कोरोना नयाँ संक्रमित पुष्टि भएका हुन् । जिजान ६३४, हफर अल बातीन ५९७, अल खोबार ५५२, अल कातिफ ५५२, बुरैद ५३६, यान्बु ४१७, आभा ४१६, खमिस मुसायद ४०७, हाइल ३५९, हाइल ३५७ र उनैज ३११ जनाको बिशेष उपचार गरिरहेका छन् ।
त्यसैगरी अल खर्च २९४, सबत अल अलयाह २७६, वादी एड दावासीर २६३, अल लिथा २५३, बायश २३५, दहराइन २२५, जुवेल २२४, अल कुनाफाद २२४ र ताबुक २०८ जनाको उपचार भइरहेका छन् । यहाँका अन्य शहरहरुमा २ सयभन्दा कम संख्यामा उपचार लिइरहेका छन् ।
त्यसैगरी साउदीमा नेपालीहरु कोरोनाबाट कति संक्रमित वा निको भएको तथ्यांक दूतावासले समेत यहाँको सरकारसँग तथ्यांक मागिरहेको बताउँछन् । दूतावासका अनुसार दैनिक जस्तो निको हुने र संक्रमित हुने भएकोले संख्या यकिन गर्न कठिनाइ भएका हुन् ।
•घरविदा जान तयारी कृष्णबहादुरको साउदीमै अन्त्येष्टि
•नेपाली दूतावास साउदीको पहलमा मृतकका परिवारलाई ब्लड मनी
•साउदीबाट अगष्टमा २२ सयभन्दा धेरै स्वदेश फर्काइयो
•साउदीमा दैनिक कोरोना संक्रमितभन्दा, निको हुनेको संख्या बढ्यो